Doctor Detective (2019) Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Created byPark Joon Woo, Song Yoon Hee
StarringBae Noo-ri, Bong Tae-gyu, Jung Kang-hee, Lee Ki-woo, Mina Fujii, Park Geun-hyung, Park Ji-young, Park Jin-hee, Rie Young-zin, Ryu Hyun-kyung
Synopsis of Doctor Detective (2019) Complete
Medical Drama လေးဖွဈပွီး MyDrama List မှာတော့ Rating 8.5တောငျ ရရှိထားပါတယျ။ မငျးသမီး Park Jin-hee ၊ မငျးသား Bong Tae-Gyu (Return စီးရီးထဲအယုတျတမာ) ၊ မငျးသား Lee Ki Woo တို့အဓိက ပါဝငျထားပွီး အပိုငျးအရအေတှကျ (16)ပိုငျး ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။လူ့အဖှဲ့စညျးအတှငျးမှာ လူတှဖြေားနာတှေ၊ မကနျြးမမာဖွဈလာရခွငျးရဲ့ဖုံးကှယျထားတဲ့အမှနျတရားကို ဆရာဝနျ တှကေ ဖျောထုတျပွောပွမဲ့ ဇာတျလမျးလေးဖွဈပါတယျ။ဂြှနျးအနျးက စကျရုံတှမှော အလုပျလုပျဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈပွီး လုပျငနျးခှငျ မတျောတဆမှုတှကေို ဖုံးကှယျပေးရတယျ။ ဒီလိုနဲ့ စကျရုံတှမှော ဖွဈလာတဲ့ ရောဂါတှေ ၊ မတျောတဆမှုတှေ နဲ့ တခွားမတျောတဆမှုတှနေဲ့ဆကျစပျမှုတှရှေိလာတဲ့အခါ……. ဂြှနျးအနျးတဈယောကျတဈယောကျ နောကျကှယျကအမှနျတရားကို ရှာဖှနေေိူငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျနျော……
Medical Drama လေးဖြစ်ပြီး MyDrama List မှာတော့ Rating 8.5တောင် ရရှိထားပါတယ်။ မင်းသမီး Park Jin-hee ၊ မင်းသား Bong Tae-Gyu (Return စီးရီးထဲအယုတ်တမာ) ၊ မင်းသား Lee Ki Woo တို့အဓိက ပါဝင်ထားပြီး အပိုင်းအရေအတွက် (16)ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူ့အဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာ လူတွေဖျားနာတွေ၊ မကျန်းမမာဖြစ်လာရခြင်းရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှန်တရားကို ဆရာဝန် တွေက ဖော်ထုတ်ပြောပြမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်းအန်းက စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆမှုတွေကို ဖုံးကွယ်ပေးရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စက်ရုံတွေမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါတွေ ၊ မတော်တဆမှုတွေ နဲ့ တခြားမတော်တဆမှုတွေနဲ့ဆက်စပ်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါ……. ဂျွန်းအန်းတစ်ယောက်တစ်ယောက် နောက်ကွယ်ကအမှန်တရားကို ရှာဖွေနေိူင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်နော်……
Storage M-Sub , Megaup , Yuu Drive , Dat Bu , SharerPW
Storage M-Sub , Yuu Drive , Dat Bu , SharerPW
ProductionSBS, The Story Works
Firt air date2019-07-17
Last air date2019-09-05
Home PageDoctor Detective (2019) Complete